गुगल मित्रतापूर्वक साइटमा Semmalt द्वारा पाँच कदम
गुगल मित्रतापूर्वक साइटमा केही चरणहरू
< h3> सामग्रीको तालिका
गुगल रैंकिंग एल्गोरिथ्म कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्
तपाईं कहाँ उभिनुभयो जान्नुहोस् गुगलको साथ
महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्सको ट्र्याक राख्नुहोस्
कुनै पनि अवस्थित गुगल पेनल्टीहरू निदान गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई ठीक गर्नुहोस्
संसाधन सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
सेतो टोपी एसईओ प्रयोग गर्नुहोस्। लि build्कहरू निर्माण गर्ने तरिकाहरू
तपाईंको साइटलाई मोबाइल अनुकूल बनाउनुहोस्
नि: शुल्क ट्राफिक पाउन को लागी सब भन्दा सजिलो तरीका र तपाइँको वेबसाइट को लागी खोज इंजिन परिणाम पृष्ठहरु (SERPs) मा दृश्यता को माध्यम बाट हो। अनुसन्धानले देखायो कि जैविक खोजी B2B र B2C वेबसाइटहरु को लागी यातायात को %१% को लागी उत्तरदायी छ जबकि गैर-जैविक ट्राफिक रुटहरु जस्तै सामाजिक मिडिया र भुक्तान गरिएको खोजले क्रमशः%% र १०% यातायात कम गर्दछ। यो जानेर तपाईं निश्चित रूपमा खोज ईन्जिनहरूका राजा, गुगलका राम्रा पुस्तकहरूमा जान चाहानुहुन्छ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो साइटलाई गुगललाई अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ।
बुझ्नुहोस् Google कसरी रAN्कि AL एल्गोरिथ कामहरू
< div> कसैलाई चिने बिना तपाईं कसरी उसको साँचो मित्र हुन सक्नुहुन्छ? एउटा चीज जुन तपाईंले गुगल र्याकिंग एल्गोरिथ्मको बारेमा बुझ्नुपर्दछ कि यो प्राय: अपडेट हुँदै जान्छ (र यी परिवर्तनहरू सार्वजनिक रूपमा ठूला व्यक्तिहरू बाहेक सार्वजनिक पनि हुनसक्दैन)।
गुगलले यो पनि सुनिश्चित गर्‍यो कि एल्गोरिथ्मको सहि आन्तरिक कार्यहरू संगठन भित्र गोप्य राखिएको छ। यो वास्तवमा खराब विचार होईन किनकि सबैलाई Google TOP मा पहिलो स्थान लिनको लागि सही कदमहरू थाहा छ, यदि यो एक गोप्य कुरा थिएन भने।
यसको मतलब कि गुगलले यसको प्रयोगकर्ताहरूका लागि सब भन्दा सान्दर्भिक परिणामहरू वर्क गर्न सक्नेछैन किनकि धेरै व्यक्तिहरू केवल कालो टोपी एसईओ प्रविधिहरू र ट्रिकहरू शीर्षमा रहनको लागि सहारा लिन्छन्, यसैले इमान्दार व्यवसायहरूको फस्टाउन गाह्रो बनाउँदछ।
तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि गुगलले कम प्रयोग गर्न सक्नुहुने कम समयमा प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा उपयोगी खोजी परिणामहरू दिन चाहन्छ। तसर्थ, यो लगातार विश्वको जानकारी संगठित गर्न को लागी प्रयास गर्दछ र यो पहुँच र सबैको लागी उपयोगी छ। एकचोटि तपाईंले गुगलको बारेमा यो थाहा पाउनु भएपछि, यसले तपाईंलाई कुन आधारमा तपाईंको वेबसाइट अपरेट गर्ने आधार दिनुपर्दछ।
यहाँ केहि सूचीहरूको सूची छ। गुगलले बनाएको प्रमुख एल्गोरिथ्म अपडेटहरू:
पेन्ग्विन अपडेट: अप्रिल २०१२ मा, यो अपडेट अनौंदर्य खरीद गर्ने स्पामरहरू र वेबसाइटहरूको गतिविधिहरूको प्रतिरोध गर्न जारी गरिएको थियो। लिंकहरू उनीहरूको SERP श्रेणीकरण सुधार गर्न।
हमिंगबर्ड अद्यावधिक: यो अपडेट अगस्त २०१ 2013 मा जारी गरिएको थियो र यसको लक्ष्य खोजी ईन्जिनलाई Google प्रयोगकर्ताहरूको प्रस context्ग र उद्देश्य बुझ्नुको सट्टा थियो। केवल शाब्दिक शब्दहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले तिनीहरूलाई नतिजा दिनको लागि टाइप गरे।
कबूतर अपडेट: जुलाई २०१ 2014 मा जारी गरिएको, यो अपडेट खोजी परिणामहरू स्थानीयकरण गर्ने बारेमा थियो।
मोबाइल-अनुकूल अद्यावधिक: यो अद्यावधिकले मोबाइल साइटलाई अनुकूल बनाउने साइटहरू मनपरायो र ती साइटहरूलाई दंड दिन Google लाई मञ्च सिर्जना गर्‍यो। यो अप्रिल २०१ 2015 मा जारी गरिएको थियो।
त्यहाँ अन्य अपडेटहरू पनि छन् जुन Semalt को SEO विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई ट्र्याक राख्न मद्दत गर्दछ तपाईको साथ सुरक्षित ठाउँमा रहन सुनिश्चित गर्नका लागि। गुगल।
तपाईं कहाँ खडा थाहा पाउँनुहोस्। गुगल
तपाईंले पहिले तपाईंको हालको र्या spot्ग स्थान थाहा पाउनु पर्छ तपाईंले यसलाई सुधार गर्न काम गर्नु अघि। यो नयाँ साइट वा अवस्थित एक हो, जानकारीको अभावले निश्चित रूपमा व्यापारको ठक्कर दिन्छ।
तपाईं semalt.net , तपाइँको डोमेन नाम यसका लागि प्रदान गरिएको ठाँउमा टाइप गर्नुहोस् र तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान गरीन्छ।
Semalt साइटमा, तपाईं पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग 8 38 Google गुगल खोजी ईन्जिनहरूबाट तपाईंको रैंकिंग स्थानीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जान्न। Semalt ले तपाईंलाई PDF वा EXCEL ढाँचाहरूमा तपाईंको विश्लेषण डाउनलोड गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
महत्वपूर्ण मेट्रिक्सको ट्र्याक राख्नुहोस्
ट्र्याकिंग सहि मेट्रिक्सले तपाईलाई आफ्नो साइटमा सुधार गर्नु पर्ने सही चीजहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ। यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन्:
जैविक यातायात: याद गर्नुहोस् हामीले कसरी अघिल्लो पटक भन्यौं कि जैविक खोजीले B2B र B2C साइटहरू उनीहरूको यातायातको %१% भन्दा बढि?
थप के हो? मिडिया र मनोरन्जन बाहेक सबै उद्योगहरूको लागि, जैविक खोजी उच्च राजस्व स्रोतको रूपमा प्रमाणित हुन्छ! अब तपाईलाई थाहा छ कि गुगलले तपाईलाई कति पर्यटकहरू भेट्टाउँछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कत्ति महत्त्वपूर्ण छ।
जैविक यातायात रूपान्तरण: यो जान्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सटीक कुञ्जी शब्दहरू जुन ट्राफिकले तपाईंको बाटो ल्याउँदछ। यो जाननाले तपाईंलाई तपाईंको दर्शकले के चाहन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं सजिलैसँग यसलाई अधिक दिन सक्नुहुनेछ।
वाणिज्य कुञ्जी शव्द श्रेणीकरण: अब तपाईंलाई थाहा छ कि कुन कुञ्जी शब्दहरू। ड्राइभ ट्राफिक, तपाईंले अगाडि ब्यवसायिक कीवर्डबाट जानकारी कुञ्जी भिन्न गर्नुपर्दछ जसले आय ल्याउँदछ। केहि व्यक्तिले कुञ्जी शब्दहरू खोज्दछन्: "कसरी छिटो कण्ठ गर्ने" वा "नि: शुल्क खेल डाउनलोड" - यी केटाहरू केहि पनि खरीद गर्न इच्छुक छैनन्। अर्कोतर्फ, केहिले "NY मा सब भन्दा राम्रो घर चालक कम्पनीहरू" वा "LA मा शीर्ष delivery डेलिभरी सेवाहरू" खोज्ने छन् - व्यक्ति जसले यस्तै कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दछ भुक्तान गर्न इच्छुक छन्। एक पटक तपाईले व्यावसायिक कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्नका लागि, तपाइँ आफ्नो रचनात्मक रूपमा उनीहरूलाई तपाइँको मेटा वर्णनमा निहित गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाइँको पृष्ठमा एसईओको लागि प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
पृष्ठ गति: तपाईं यो सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईंको पृष्ठ लोड समय मोबाइल र डेस्कटप उपकरणहरूमा दुबै सकेसम्म छोटो छ। गुगलले यसको पृष्ठलाई यसको SERPs मा दर्जा दिन साइट गति प्रयोग गर्दछ। तपाइँको पृष्ठ गति निर्धारण गर्न Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो पृष्ठ लोड समय देख्नुहुनेछ, तपाईंलाई स्कोर दिइनेछ, त्रुटिहरू हाइलाइट हुनेछन् र तपाईं यहाँ स्वतन्त्र परामर्श पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेर बताउन। यहाँ एक साइट को उदाहरण हो।
पत्ता लगाउनुहोस् कुनै पनि अवस्थित गुगल पेन्टलहरू र तिनीहरूलाई फिक्स गर्नुहोस्
तपाईको साइटको गहन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ यदि त्यहाँ कुनै गुगल छ कि भनेर पत्ता लगाउन। दण्डहरू हाल प्रभावमा छन्। तपाईको रैंकिंग सुधार गर्न किन समय, प्रयास र स्रोतहरू खेर फाल्ने यदि तपाईं पहिले नै गुगलको खराब पुस्तकहरूमा हुनुहुन्छ?
स्प्याम लिंकले हजारौं वेबसाइटहरूको रैंकिंग बढायो सम्म गुगलले २०१२ मा अन्त्य गर्‍यो। अब गुगलले तपाइँलाई जरिवाना मिल्छ भने यदि स्प्याम्मी वा अप्राकृतिक लिंकले तपाइँको वेबसाइटमा जोडिएको छ भने। यसैले तपाईंको लिंक निर्माण रणनीतिहरूको बारेमा सावधानीपूर्वक सोच्न महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंले सर्वप्रथम तपाईंको अनौंठो सक्रिय ब्याकलिंक्स, कुनै पछ्याउने लि ,्कहरू, एch्कर ग्रन्थहरू, आदि खोजेर तपाईंको सबै इनबाउन्ड लिंकहरूको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि, तपाईं चाहनुहुन्छ लिंकहरू पहिचान गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेबसाईटमा हानिकारक छ ताकि तपाईं ती टाढा गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले गर्न सक्ने दुई तरिकाहरू छन्:
लिंकहरूलाई मैन्युअल्ली हटाउनुहोस् : वेबसाइटको साइट मालिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जहाँ खराब लिंकहरू आउँदैछन् र विनम्रतापूर्वक उनीहरूलाई तपाईंको लिंक हटाउन वा लिंकमा कुनै फलो-फॉलो ट्याग थप्न अनुरोध गर्नुहोस्। यदि तपाईं विगतमा लि buying्क खरीदमा संलग्न हुनुहुन्छ भने, तपाईंले राम्रोसँग लिनु पर्दछ जो तपाईंको लागि लिंकहरू पाएको व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई हटाउनको लागि भन्नुहोस्।
लिंकहरू नदिनुहोस्: मा घटना जुन तपाईं खराब लिंकहरू म्यानुअल रूपमा हटाउन सक्नुहुन्न, तपाईं गुगलको अस्वीकार लिंक उपकरणलाई दोस्रो विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि गुगलसँग लिंकहरू हटाउने अधिकार छैन। अस्वीकृत लिंक उपकरणले के गर्दछ Google लाई ती लिंकहरूको सम्बन्धमा रोक्नको लागि अनुमति दिनुहोस् जुन तपाईंको दर्जाको लागि महत्वपूर्ण छ।
सृष्टिकर्ताको सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले कुञ्जी शव्दहरू (सूचनात्मक र व्यावसायिक) थाहा पाउनुभयो जुन ट्राफिकमा आउँदछ, त्यसो भए तपाईले Semalt विश्लेषण उपकरण प्रयोग गर्नका लागि तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूको श्रेणीलाई पनि खोज्न चाहानुहुन्छ।
अब तपाईलाई आफ्ना दर्शकहरूको आवश्यकता थाहा छ, तब तपाईं यी कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भय aw्कर सामग्री सिर्जना गर्न जुन उनीहरूलाई उपयोगी छ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं संसाधन सामग्री लेख्न सक्नुहुन्छ:
१। सामग्री अनौंठो बनाउनुहोस्: यदि गुगलले तपाईंको सामग्रीलाई अद्वितीय मान्दछ भने, तपाईंलाई तपाईंको सामग्री पुन: लेख्ने वा साहित्यिक रूपमा लिने भन्दा पनि उच्च स्थानमा राखिन्छ। सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री अनौंठो छ। तपाइँ Semalt को पृष्ठ विश्लेषण उपकरण को उपयोग गर्न को लागी तपाईको विशिष्टता रेटि find पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको स्कोर कम वा औसत छ भने Semalt ले तपाईको महान लेखकहरुको टोलीमा डाइरेक्ट गर्दछ जुन तपाईलाई "मेरो सामग्री सुधार गर्नु" मा क्लिक गर्ने बखत उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। । "सूची-शैली प्रकार: कुनै पनि होइन;">
२। सहि डाटाको उपयोग गर्नुहोस्: जब तपाईका लेखहरूमा तथ्यहरू सहि डाटाका साथ संचालित हुन्छन्, तपाइँको सामग्री आधिकारिक देखिने छ र सम्भावित बिभिन्न प्लेटफर्महरूमा साझेदारी हुने सम्भावना बढाउँदछ यसैले यातायात बढाउँदछ र अन्ततः TOP मा तपाइँको स्तरवृद्धि बढाउँदछ। ।
तपाईंको सामग्रीलाई सुधार्ने अन्य तरिकाहरूमा मनमोहक कथाहरू र आकर्षक हेडलाइटहरू समावेश छन्।
व्हाइट हेट प्रयोग गर्नुहोस्। SEO TECHNIQUES BOILD LINKS
लिंकहरू गुगलले यसको एल्गोरिथ्ममा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रमबद्ध कारकहरू हुन्। स्वस्थ लिंकहरु जुन तपाईको बाटोमा आउँदछ, तपाईको रैंकिंग राम्रो छ। तपाईं तपाईंको लिंक को रस बढा बनाउन सक्नुहुन्छ निम्न गरेर:
ब्लगिंग र तपाईंको सम्बन्धित प्रासंगिक लिंक सहित। लेखहरू।
साइटहरूमा प्रशंसापत्र लेख्नु जुन तपाईले प्रयोग गर्नुभयो वा तिनीहरूको उत्पादनहरू र/वा सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
ब्लग पोष्टहरूमा बहुमूल्य टिप्पणीहरू गर्नु। र फोरमहरू।
उत्तम सामग्री सिर्जना गर्दै
कसरी तपाईं एंकर पाठहरू वितरण गर्नुहुन्छ। विविधता।
नम्रतापूर्वक उद्योगका साथीहरूबाट ब्याकलिंक्सको लागि सोध्नु।
पूर्ण रूपमा लिंकहरूको अधिक अनुकूलन बेवास्ता गर्दै।
तपाईंको साइट मोबाइल बनाउनुहोस् मित्र
अध्ययनहरू छन् देखाईयो कि सबै खोजहरूको लगभग %०% मोबाइल उपकरणहरूमा गरिन्छ र गुगलले स्पष्ट पारेको छ कि मोबाइलका लागि अप्टिमाइज नगरिएका साइटहरू उच्च श्रेणीमा हुँदैनन्। तपाईं आफ्नो साइट बनाउने क्रममा, तपाईं मोबाइल उपकरणहरूलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ। Semalt सँग एक अद्भुत वेब विकास सेवा छ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइट पूर्ण रूपमा Google मैत्री तरीकाले निर्मित छ।
गुगललाई मात्र थाहा छ यसको एल्गोरिथ्मले ठ्याक्कै तरीकाले काम गर्दछ, अझै केहि प्रमाणित तरिकाहरू छन् जसले तपाईंलाई गुगल TOP मा उच्च स्थान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। जबसम्म तपाईं शीर्ष SERPs मा स्थिति प्राप्त गर्न अन्डरह्यान्ड प्रविधिहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ, Google सँग तपाईंको बिरूद्ध केही हुँदैन। तपाईको काम भनेको गुगल साइटलाई सान्दर्भिक सामग्री प्रस्ताव गर्ने क्रममा तपाईको साइटलाई राम्रो सेतो टोपी एसईओ टेक्निकको साथ प्रमोट गर्नु हो र तपाई चाँडै नै उच्च श्रेणीमा आउनुहुनेछ।